Fahasalamana: misy voka-dratsy amin’ny saina sy ny vatana ny tsy fahampiana ioda | NewsMada
Fahasalamana: misy voka-dratsy amin’ny saina sy ny vatana ny tsy fahampiana ioda
Hitohy ny fanovozana ioda ny sira ampiasain’ny tokantrano rehetra ho amin’ny taona 2019, taorian’ny fiaraha-miasa amin’ireo orinasa mpamokatra sira any Antsiranana sy any Morondava, hisy ny fanovozana ioda ny sira vokarina any Toliara, araka ny fanazavan’ny talen’ny kabinetran’ny minisiteran’ny Fahasalamana, Randriamarotia Willy, omaly teny Ambohidahy.
Singa iray mampivelatra ny sain’ny zaza any an-dakilasy ny ioda ka tokony hahazo ny fatra sahaza azy ny rehetra, indrindra ny zaza. Maro ny sakafo ahitana ioda ,toy ny eponard sy ny hazandranomasina fa tsy ampy ka tsy maintsy asiana ioda ny sira fampiasa isan’andro.
Araka ny fanadihadiana nasionaly momba ny ioda ny taona 2014, mahatratra 21,3% amin’ny tokantrano malagasy ihany ny mampiasa sira misy ioda manaraka ny fenitra. Nanomboka ny taona 1994 no efa nisy ny fanasiana ioda ny sira avy amin’ny toromariky ny sampandraharahan’ny Firenena mikambana momba ny fahasalamana (OMS).
Mikarakara fankalazana ny Androm-pirenna iadiana amin’ny voka-dratsin’ny tsy fahampiana ioda ny minisitera sy ny mpiray ombon’antoka, ny 28 sy 29 novambra ho avy izao, any Fianarantsoa. « Ny fihinanana sira misy ioda, antoky ny fivelarana ara-tsain’ny zaza sy ny fahasalaman’ny daholobe » ny lohahevitra.
Mitondra voka-dratsy maro ny tsy fahampiana ioda toy ny fahafahan-jaza ho an’ny vehivavy mitondra vohoka, fahataran’ny fitomboana, fivontosana eo amin’ny tenda (varingisa).
Maro ny hetsika hotanterahina any Fianarantsoa hanentanana ny vahoaka momba ny maha zava-dehibe ny ioda ho an’ny vatana sy ny saina.
Manomboka izao, hisy fitiliana ny sira rehetra amidy eny an-tsena raha misy ioda na tsia.